December 26, 2020 - Khitalin Media
အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၆)ချက်
December 26, 2020 by Khitalin Media
အသက် ၁၆ နှစ် မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း မိန်းကလေးများသာ ဖတ်ရန်… ညီ မ လေး ရေ …. လှပတဲ့ မျက်နှာ တစ်ခုက တစ် ချိန် ကျ ရင် အို မင်း သွားလိမ့်မယ် … ။ စွဲမက်စရာ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း တွေ က လည်း တစ်ချိန်ကျရင် ပြောင်း လဲ သွားပါ လိမ့်မယ် နော် … ။ ဒါပေမယ့် မိန်းမကောင်း တစ်ယောက်က တော့ တစ်ချိန်ကျရင် လည်း မိန်းမကောင်း ပါပဲ …. ။ ဘယ် အချိန်ပဲ ရောက် ရောက် မိန်းမကောင်း ပါ … Read more
ဆောရီးပါ ညီမလေးတို့ရေ….ညီမလေး ဈေးကောင်းရပါစေ …
ညီမလေး ဈေးကောင်းရပါစေ …..မားဆိုး ဆောရီးပဲ ညီမလေး … ကိုယ် ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ မင်းအမေ နေမကောင်းတာ…. မင်းမောင်လေး ညီမလေးတွေ ကျောင်းစားရိတ်လိုနေတာ… မင်းကိုယ်တိုင်အတွက် ရောင်းပန်းလှဖို့၊ ဈေးကွက်ဝင်ဖို့… ပါတိတ်၊ သရီးစတပ်၊ မီနီစကပ်၊ နှုတ်ခမ်းနီ ပါးနီ၊ အော်ဒီကလုံး ကိုယ်မတတ်နိုင်ဘူးကွဲ့…. မင်းတို့က မပဋာဆိုရင် ကိုယ်လည်းပဲ မောင်ဒါသပါကွယ်။ ဆောရီးပဲ ညီမလေးရေ … မင်းရဲ့ ဘုရားပေး လယ်တပွဲ နှမ်းပဲစိုက်စိုက်၊ ဘူးပဲပျိုးပျိုး နွေစပါး၊ မိုးစပါးနဲ့ သီးထပ်သီးညှပ် မပြတ်တမ်းစိုက်လည်း ကိုယ့်မှာ ဓာတ်မြေသြဇာဖိုးမရှိ… ဟိုကောင်တွေဆီမှာတော့ အာသာငမ်းငမ်း အကြည့်တွေ ရှိချင်ရှိလိမ့်မယ်…. ဒါကိုတော့ မင်းလည်းသိတယ်၊ ကိုယ်လည်းအသိပဲ။ ဆောရီးပဲ ညီမလေးရေ … မင်းဟာ နှုတ်မစောင့်သော လိပ်မလေး ဆိုပါတော့ … Read more
မ်ိန်းကလေးတိုင်း ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာတွေ
မ်ိန်းကလေးတိုင်း ဘဝမှာ တစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာတွေ… ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေကျ နိစ္စဓူဝကိစ္စတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတခုကို တခါတရံလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲနေထိုင်လိုက်ကြည့်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတခုပါပဲ ပျိုမေတို့ရေ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပျိုမေတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တခါလောက်တော့ အနည်းဆုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်…. (၁) တစ်ယောက်တည်းခရီးတွေ ထွက်ပါ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ တယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ဆိုတာဟာ အနည်းငယ်စွန့်စားရတဲ့ ကိစ္စတခုဆိုပေမယ့် တယောက်တည်းခရီးသွားခြင်းကနေ ထင်မထားလောက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်တာကြောင့် လုံခြုံဘေးကင်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ နေရာဒေသတခုခုကို တယောက်တည်း ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ် …။ (၂) တရက်လောက် ဖုန်းမသုံးဘဲ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းကြည့်ပါ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကို ဖြတ်ပြီး ဖုန်းအသုံးမပြုဘဲ နေကြည့်ဖို့ဆိုတာဟာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတခုတော့ … Read more
ချစ်သူစုံတွဲတွေ အပါအဝင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့် ဖြစ်စေ ဘယ်လိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုး မဆို ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်နေတဲ့ ချစ်သူရည်းစားပဲ ဖြစ်နေပါစေ ခုဖော်ပြမယ့် အချက်တွေထဲက တစ်ခုခု လာလုပ်ရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲစခန်း ခေါ်သွားလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ချစ်သူကို သည်းခံနေမယ့်အစား တရားဥပဒေအရ ဖြေရှင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံတွေပေါက်ကြားစေခြင်း တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံတွေကို အွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေ၊ တခြားဘယ်နေရာမှာ အဆို ပြန့်နှံ့စေခဲ့ရင်တော့ ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းတာကြောင့် ရဲတိုင်ပြီးအမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ (၂) ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များပြုလုပ်ခြင်း ချစ်သူမကလို့ လင်မယားဆိုရင်တောင် တစ်ယောက်က အခြားတစ်ယောက်ရဲ့ ငွေကြေးဘဏ္ဍာ (ဘဏ်အကောင့်) နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝင်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဥပမာ သူတို့မတတ်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းကို … Read more
အချစ်မှာ ထူးဆန်းတဲ့ မှော်စွမ်းအင်ရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကပြောကြပါတယ်။ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဖွင့်မပြောရင်တောင် သဘာဝတရားကြီးက သူတို့အစား ပြောပေးတတ်ပါတယ် လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်မပြောပဲ တိတ်တိတ်လေးအရမ်းလွမ်းနေတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)အိပ်မက်မက်တယ် အိပ်မက်ဆိုတာ စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖြစ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုပါ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို မပြောမိ၊ မတွေးမိပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့ကို တွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကို သူအရမ်းလွမ်းပြီး သတိရနေလို့ပါ သင့်အကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါတွေးလွန်းပြီး သူ့ရဲ့စိတ်က သင့်အနားမှာပဲ တဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် (၂)မထင်မှတ်ပဲတွေ့တယ် သင့်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်က အရမ်းလွမ်းတဲ့အခါ မမျှော်လင့်ပဲ သူနဲ့ဆုံတာမျိုး၊ မချိန်းထားပဲနဲ့ တစ်နေရာတည်းကို အတူတူရောက်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် သင့်ဖက်ကတိုက်ဆိုင်မှုလို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပေမယ့် တကယ်တော့ သင့်က ဒါမှမဟုတ် တစ်ဖက်လူက သင့်ကို အရမ်းသတိရနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၃)စိတ်တွေစုစည်းမရဖြစ်နေလိမ်မယ် … Read more
ဝါညစ်နေတဲ့သွားကို သဘာဝအတိုင်းဖြူဝင်းလာစေမယ့်နည်းလမ်း (၅)မျိုး သွားဖြူဖြူလေးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ်မလား။ သွားဝါပြီး မဲညစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သွားဖြူဝင်းလာဖို့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူတွေများစွာရှိကြပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးပြီး သွားဖြူအောင်လုပ်ကြတယ်သူတွေက များပါတယ်။ ပိုက်ဆံအရမ်းကြီးမကုန်ဘဲ သွားဖြူလာစေမယ့် သဘာဝနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ သွားကိုဖြူဝင်းလာအောင်လုပ်နိုင်ပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုံးရယ်ပြနိုင်မှာပါနော်..။ ကဲ ဘယ်လိုနည်းတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်..။ (၁) ချင်း (ဂျင်း) နဲ့ ဆား သွားဖြူဝင်းလာဖို့ဆိုရင် ချင်း (ဂျင်း)၊ ဆား နဲ့ သံပုရာသီးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာက ချင်းစိပ်သေးသေးလေးကို ကြိတ်စက်ထဲထည့်ပြီး ကြိတ်ပေးရမှာပါ။ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးပုံတစ်ပုံကို ကြိတ်ထားတဲ့ချင်းထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက် သံပုရာသီးကို စိပ်ပြီး အရောအနှောထဲကို ညှစ်ထည့်ပြီးနောက် သမအောင်မွှေလိုက်ပါ။ အဲဒီအရောအနှောကို သွားတိုက်ဆေးအနေနဲ့ အသုံးပြုလိုက်ရုံပါပဲ။ (၂) … Read more
မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲပြီးရင် ပိုလှလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
အသည်းကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေး တော်တော်များများကို သတိထားကြည့်မယ် ဆိုရင် အသည်း ကွဲ ပြီးရင် အရင်ကထက် ပိုလှလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ဥပမာ ပြရမယ်ဆိုရင် JB နဲ့ပြတ်ပြီးနောက် Selena Gomez ပိုလှလာတာမျိုးပါ။ တစ်ချို့ ဆိုရင် အသည်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ သိသိသာသာကြီးကို ကိုယ်အလေး ချိန် ကျ၊၀ိတ်ကျသွားပြီး အရမ်းကို လှလာကြပါတယ်။တကယ်တော့ ဒါဟာ ထင်ေ ကြး မဟုတ်ပါဘူး။လေ့လာမှုတစ်ခုမှာကိုက အမျိုးသမီး (၇၇)ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသည်းကွဲပြီးရင် ကိုယ်အလေးချိန်သိသိသာသာကျသွားတယ်လိုိ့ ဆိုထား ပါ တယ်။မိန်းကလေးတွေ အသည်းကွဲပြီးရင် ပိုလှလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ကတော့….. (၁)စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြိုပြင်ဆင်ထားလို့ မိန်းကလေးတွေဟာ အကြာကြီးလက်တွဲလာတဲ့ relationship တစ်ခုနဲ့ လမ်း ခွဲပြတ်စဲတော့မယ်ဆိုရင် အစောကြီးတည်းက ကြိုတင် ပြင်ဆင် ထားတတ်ကြ လို့ပါ။အများရဲ့ အမြင်မှာတော့ … Read more
အသက် ၂၅ ကျော်လာတဲ့အခါ ဘယ်တော့စားရမှာလဲဆိုတာမျိုး သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေဆီက အမေးခံဖူးကြမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချိန်အကြာကြီးတွဲတာကြပြီးပြီ ဆိုရင်တောင် ဖူးစာမပါတဲ့အခါ၊ အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ ကွဲကွာသွားတက်ကြပါတယ်။ သက်ဆိုင်သူ ကိုယ်ဆီရှိထားကြပေမယ့်လည်း ဒီအ ချက် (၈) ချက် ရှိနေမယ်ဆိုရင် သင်တို့ ဖူးစာ ပါပြီးပေါင်းဖက်ကြရမယ့် ရာနှုန်း အလွန်နည်းပါ လိမ့် မယ်။ တ နည်း အား ဖြင့် သင် တို့ ဖူး စာ ပါ၊ မ ပါ ဆို တာ ဒီ အ ချက် တွေ ကြည့် ပြီး လည်း သိ နိုင် ပါ တယ်။ ၁။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ဘယ်တော့မှ … Read more